Tantaran'ny Teny Malagasy: Ireo Andrarezina | Hevitra MPANOHARIANA |
Tantaran'ny Teny Malagasy: Ireo Andrarezina
2016-08-06 @ 22:54 in Kolontsaina
Mitohy tsy be resaka ny fampitantsika ny fampirantiana nototosaina tao amin'ny Tahala Rarihasina tamin'ny volana jona lasa teo.
Afisy fahaenina. Toa vahiny lehiretsy no lohalaharana nolazainy?
Ka ry zareo kosa no nahafahana nampiditra ny Abidia Latina hanoratana ny teny malagasy koa!
Efa nisy namoaka ho amin'ny teny latina kosa e! Ry Lazarista tany Faradofay!
Avy amin'ireto olona ireto kosa indray ireo nianatra nanoratra sy namaky teny voalohany ankoatra ny mpanjaka Radama Rainy.
Ity koa mbola misionera vahiny fa Katolika Frantsay kosa. Fantatrareo moa fa Frantsay no tena tian'ny mpanjaka Radama Rainy nifandraisana voalohany, noho i Robin izay nampianatra azy, fa napetrapetrak'ireo tokony ho manampahefana frantsay tokony hifampiresaka aminy izy. Nivadika fironana tanteraka nankany amin'ny Anglisy izy noho izay toe-javatra izay.
Mazava loatra raha resaka fandikana lahatsoratra ny famantarana ny dikan'ny voanteny anglisy (na frantsay) ho malagasy no asa lehibe hafa taorian'ny nandikana ny baiboly ho amin'ny teny malagasy.
Anisan'ny olona ambony ny mpitandrina tamin'izany fotoana izany, satria olona tsy maintsy nianatra izy ireny. Izay koa no nahatonga azy ireny hanana ny toerana hitam-bahoaka.
Ankoatra ny mpitandrina dia ny mpampianatra ihany koa no manampahaizana sy nanana fandalinana tamin'izany fotoana izany. Fantatrareo moa fa tamin'ny andron'ny faha-mpanjaka tokana teto Madagasikara, ireny fiangonana protestanta tranainy hitantsika ireny dia sady sekoly rehefa andavanandro no fiangonana rehefa alahady na andro fivavahana lehibe? Politikan'ny mpanjanatany Frantsay ny nanerena ny fanasarahana ny sekoly tamin'ny fiangonana. Nitondra takaitra lalina dia lalina tamin'ny sekoly protestanta teto Madagasikara tamin'ny fanombohan'ny vanim-potoanan'ny fanjanahanantany izany ankoatra ny tsy maintsy hampianarana ny mpianatra amin'ny teny frantsay.
Afisy fahafito. Miditra tsimoramora mankao amin'ireo Andrarezin'ny teny malagasy teraka tao anatin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany isika.
Lala sy Noro, raha atao fampitahana dia karazany "methode Boscher" malagasy izany raha ny taonany saingy Lala sy Noro malagasy efa tsy fantatry ny taranaka ankehitriny intsony, fa ny "methode Boscher" iky? Ifampitadiavana hatrany nefa efa firy taona?
Tsy tsikaritrareo va? Toa ireo mpamoaka fampianarana teny malagasy ve no tian'ilay mpanatontosa ny fampirantiana sa tena nanana hetaheta ny hampita fahaizana tamin'ny taranany ny manampahaizana fahiny?
Boky fianaran'ny ankizy ambaratonga faharoa, tamin'ny repoblika roa voalohany, na repoblika voalohany sy tetezamita voalohany miampy tapatapaky ny repoblika faharoa izany takelaka notsongaina izany. Ny ankehitriny no tsy fantatro.
Izay vao tena mpanoratra madiorano!
Raha tsy fantatrao ity mpanoratra ity dia... mbola Malagasy nianatra ihany ve ianao?
Na dia Malagasy mpandala ny teny malagasy aza ianao dia mety mba nisy olona tsy fantatrao ihany tamin'ireo izay nolazaina ary misy koa ireo izay tokony nampidirina nefa tsy tafiditra. Ireo andrarezina ihany no navoaka fa tsy ireo mpanoratra fanta-daza rehetra tsy akory.